Bafuna kumiswe umfundi osolwa ngokudlwengula | News24
Bafuna kumiswe umfundi osolwa ngokudlwengula
Imibhalo elengiswe eNyuvesi yaKwaZulu-Natal ngemuva kokudlwengulwa komunye wabafundi ofuna kule nyuvesi.ISITHOMBE : lethiwe makhanya
INHLANGANO yabafundi i-EFF Student Command eNyuvesi yaKwaZulu-Natal esigcemeni esiseMgungundlovu ithi ifuna amiswe esikoleni umfundi wowesilisa osolwa ngokudlwengula umfundi wesifazane ofunda kuyona le nyuvesi.
Lokhu kuvezwe uNobhala jikelele wale nhlangano uMnuz Kuti Khumalo esithangameni sabezindaba ebesikuyona le nyuvesi ngoLwesihlanu olwedlule mhla zili-11 kuNhlaba (May).
Lo mfundi wesifazane kusolakala ukuthi wadlwengulwa ngesikhathi besephathini ngaphandle kwamagceke asenyuvesi.
Kusolwa ukuthi wafakelwa isidakamizwa esiphuzweni sakhe ngaphambi kokuba adlwengulwe. Lesi sigameko senzeka ngenyanga ka-Ndasa (March) kodwa lolu daba luze lwavela manje emva kokuba kubhalwe ngalo enkundleni yezokuxhumana i-Twitter.
UMnuz Khumalo uthe abenelisekile ngendlela abaphathi bale nyuvesi abalusingethe ngayo lolu daba.
Uthe indlela abenza ngayo kukhombisa ukuthi abanandaba nesithunzi somuntu omnyama.
“Isigungu esimele abafundi (SRC) sisatshisiwe ngokuthi sizomiswa enyuvesi uma kungukuthi siyaqhubeka nokubelesela lolu daba .
“Nathi asazi ukuthi kuzokwenzekani kuthina. Sifuna lo muntu owenze lokhu abhekane nengalo yomthetho.
“Sekuphele izinyanga ezimbili lolu daba labikwa kodwa luze lasukunyelwa manje ngoba sekuvele ezinkundleni zokuxhumana.
“Umfundi osolwa ngalesi sigameko uvele wathuthwa inyuvesi wayofunda esigcemeni sase-Westville eThekwini. Bafuna ukuthi ahambe ayoqhubeka ayodlwengula abanye abantu khona futhi.
“Sifuna ukwazi ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi bamususe bamuyise kude ekubeni kusaqhubeka uphenyo? Lo muntu kumele engabe umisiwe kuze kube uphenyo luyaphothulwa,” kubeka yena.
Uqhube wathi indaba yokudlwengulwa nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane ayinakiwe.
Uphinde waveza ukuthi ngesonto eledlule kuphinde kwadlwengulwa omunye wesilisa endaweni ehlala abafundi kule nyuvesi i-Wob.
“Uhambile wayobika icala emaphoyiseni kodwa ngenxa yokusaba ukuhlambalazeka ugcine eselesula icala ngoba amacala afana nalawa abuye athathwe njengenhlekisa. Sifuna labantu abenza lokhu babhekane nengalo yomthetho ukuze abafundi bezophepha.”
NgoLwesithathu olwedlule mhla ziyi-9 kuNhlaba (May) abafundi bavuke umbhejazane bateleka befuna ukuba kuxoshwe lo mfundi obebonakala ecanasa emagcekeni ale nyuvesi.
Inyuvesi ikuphikile ukuthi lo mfundi usesusiwe esigcemeni esiseMgungundlovu wayiswa e-Westville.